Sida loo Download Lynda Videos Si fudud
> Resource > Download > Sida loo Download Videos ka Lynda
Lynda waa e-barashada boosteejo ah oo weyn, kaas oo daboolaya dhammaan noocyada kala duwan ee koorsooyinka, laga bilaabo Casharrada software in xirfadaha ganacsi. Dhammaan koorsooyinka waxa loo dhiibaa iyada oo loo marayo videos. Waxaa haboon si ay u helaan maktabadda badan oo koorsooyinka ku saabsan Lynda haddii aad ku leedahay xiriir internet wanaagsan. Laakiin waxa uu noqonayaa mid ka kaaftoomi in la daawado Lynda videos offline. Ma jiraa hab ka soo baxay? Haa, waa hubaal. Waxaad tahay meel ku haboon in xal weyn u hesho. The Wondershare AllMyTube for Mac ( AllMyTube ) gelineya inaad soo bixi dhan videos ka Lynda. Waxa kale oo aad u bedeli karaan videos in ay qaabab kale si ay u ciyaaro kombuyuutarrada gacanta aad. Ma sugi karo in aad iska baarto? Halkan waxa aad ka tagaan.
Marka hore kala soo bixi barnaamijkan si loo soo dajiyo on your computer. Waxaa fur dib markii la rakibey. Waxaan doonaa qaadan version Mac sida tusaale oo aan ka hubi tallaabooyinka hoose.
1 Raadi Lynda videos aad u baahan tahay
Tag website Lynda ee in la helo videos aad u baahan tahay. Markaas riix videos ay ku ciyaaraan. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo Safari si dhan videos in la ogaado by barnaamijka.
Marka video la ciyaaro, waxaad ka heli doontaa ah Download button Midigta sare ee shaashadda video ah. Riix badhanka iyo barnaamijka bilaabi doonaan in ay soo bixi video ah.
Hab kale waa in aad nuqulka url ee video iyo riix URL paste button. Ama waxaad uun jiidi karaan jeedi url video barnaamijka. Ku dar videos badan intii suurto gal in ay safka dajinta iyada oo mid ka mid ah siyaabaha kor ku xusan oo barnaamijkan soo bixi kartaa 5-10 videos waqti isku mid ah.
3 Beddelaan Lynda videos in qaabab kale
Ka dib markii videos waxaa lagala soo bixi, haddii aad rabto inaad iyaga ciyaaro kombuyuutarrada gacanta aad, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay marka hore iyaga loogu badalo in ay qaabab kale. Taga laybareeriga bixi oo riix badhanka badalo ku yaal dhinaca midig ee video ah. Dooranaysaa qaab aad u baahan tahay. Riix OK si ay u bilaabaan soo celiyaa.
Ka dib markii diinta, aad xakameeyo-riix kartaa video iyo dooro Show in Folder si loo helo meesha ay ku kaydsan yihiin videos. Markaas waxaad ku wareejin karaa videos ka gal qalabka la qaadi karo si aad ku raaxaysan daawashada cajaladaha ah wakhti kasta iyo meel kasta. Mar dambe ma ka waaban. Just download barnaamijka si uu u siiyo go a.